2 Corinthians 5:17 wuxuu yidhi, "Sidaas daraaddeed haddii qof Masiix ku jiro waa abuur cusub, oo waxyaalihii hore way dhammaadeen; Bal eega, wax waliba way cusboonaadeen e. "
Mar kasta oo sanadka cusub Isbahysiga agagaarka, akhyaarey bilaabaan in ay ka fikiraan wax ay bedeli karaan noloshooda. Dadka qaarkood waxay leeyihiin in ay u socdaan in ay lumiyaan miisaan iyo bilowdo cunista cuntada caafimaad leh. Qaar kalena waxay sheegeen in ay u socdaan in ay dib u tagtid koleejka ama heli uga bixi lahayd daynta. Qaar waxay yidhaahdaan in socday inuu qoro buug ama bilaabaan ganacsi ay iyagu. Markaasaa kuwa kale oo u huran qaadan abaabulay ama waqti dheeraad ah qoyska iyo saaxiibada.
Bilawga sanadka cusub runtii waa xilli aad u weyn in isbeddel ku samayso noloshaada. Waxaan aaminsanahay in Ilaah ina siinaysaa wakhtiga ioy sida hab loogu talagalay noo istaag, eeg dib ugu nolosheena, iyo garto waxyaabaha inaan beddeli karaa mustaqbalka. Si kastaba ha ahaatee, dad badan diiradda on samaynta aragba oo keliya isbeddel - isbeddellada hagaajin doontaa sida ay u eegto, wanaajiyo heerka nolosha, ama hagaajiyo sida dadka kale iyaga ka aragtid. Waxaan aaminsanahay in isbedel ugu fiican ee aad samayn kartaa waa isbedel ku yimi gudaha baxay - beddel lagu sameeyo wadnaha, ruux, iyo maskaxda. In si kale loo dhigo, isbedel keenaya saabsan cusub ah aad ee sanadka cusub. Waayo, halkaas waxaa si dhab ah uma noqon karaan Sanadka Cusub idiin haddii aanay jirin Sannadka Cusub ayaa aad cusub.
Sidaas, maanta, waxaan doonayaa in aan halkaan idin kula wadaago ka Ereyga Ilaah sida aad noqon kartaa cusub ah aad sida aynu madax kale sannadka cusub. In Second Corinthians cutubka 5, Bawlos waxa uu warqad u soo qoro Mu'miniinta Korintos ku saabsan waxyaalaha ay dhimashada Masiixa. Wuxu ku nuuxnuuxsaday, in Masiixu wuxuu u dhintay "dadka oo dhan", sidaa darteed qof kasta u helo nolol cusub oo xagga Ciise Masiix. Sababta oo ah Masiixa dhimashadiisa, badbaadada waxaa aan ku xaddidnayn Yuhuudda, laakiin waxaa la furay in qof walba. Waa war fiican inoo ah maanta, sababtoo ah waxa ay u ogolaanaysaa inay noo sheeg in qof kasta yeelan karaan isbeddel weyn ee ay nolosha xoogga Injiilka Ciise Masiix.
Dad badan ayaa laga helaa nolosha cusub ee Masiixa. Dadka qaar caan ah oo aad maqasheen ee, sida: Fanaanada Carrie Underwood, Super-Bowl Tababaraha kooxda kubada cagta guuleystay Tony Dungy, ciyaaryahanka NBA Kevin Durant, qoraa wararka iyo faallooda Kirsten Powers, actor Blair Underwood, cayaaraha Olympic Brady Ellison, billado dahab Sanya Richards-Ross, iyo horyaalka safar golf PGA Webb Simpson, ayaa dhamaantood sheegay in qofka farqiga ugu weyn sameeyey noloshooda waa Ciise Masiix.
Blair Underwood yiri, "Waxaan ahay masiixi. Waxaan rumaysanahay in Ilaah uu leeyahay qorshe. Waxaan rumaysanahay in uu isagu ma uu naga tago laalaaday. Sida nin, ma ahan in aan jawaabaha oo dhan. In ay awoodaan in ay soo jeedin arrimaha ka badan si uu shuqulladiisa xoogga sare ii. "
Tony Dungy yidhi, "Waxa aad marna socda si aad u hesho meel kasta oo sports ah ama nolosha ilaa aad ka noqoto aaminsanahay runta ah oo injiilka Ciise Masiix. Waxa aad noqon kartaa cayaaraha rasmiga ah ama ay leeyihiin magac iyo nice baabuur iyo guryo fiican oo lacag aad u badan, laakiin waxa aad ka heli doontaa waa in dhammaan oo ah alaabtii in iska quruxsan si deg deg ah u dhaco. Waxaad si ay u fahmaan waxa weeye, Masiixu wuxuu u dhintay dembiyadeenna, iyo in uu ku dhintay ma ahan oo keliya in ay Badbaadiyeheenna ah, laakiin si uu noqon karaa xarunta of nolosheena. "
Kirsten Powers yiri, "Ma dhab u dareemaan sida aan lahaa geesinimo kasta oo markii aan noqday Christian ah; Waxaan kaliya siiyey in aan aan ahaa geesinimo. Ma aan heysan wax kala doorato. Dhigaa waxaan isku dayaynaa in aan marnaba ma rumaysan laakiinse anigu uma aan ka fogaado kaliya aqbalayaan Masiix ayaa laga yaabaa. "
Ciyaaryahanka NBA Kevin Durant yiri, "Waxaan aaminsanahay jacaylka Ilaah ii, dhimashada Hadyada Ciise dembiyadayda, iyo nimcadiisa, laakiin aanu shuqullo wanaagsan, waa waxa iga badbaadiyay. Taasi ii is-hoosaysiiyana oo ka dhigaysa i caabud. Sidoo kale waxaan rumaysanahay Jannada loo celiyey, aniga iyo in sida ugu fiican ee weli waa inay yimaadaan. Waxaan ku daray tattoo fudud on my curcurka oo oranaya, live for daa'in. Ereyga Ilaah ayaa sheegay in halka aan ka joogno dhan madax. Oo anigu waxaan doonayaa inaan bilaabi leh muuqaal in weligeed ah oo ku saabsan wax walba oo aan hadda sameyn nool. "
Clup Fanaanada abaalmarin muteysta Carrie Underwood yidhi, "My songs waxaa mararka diiradda saaray Ilaah, Ciise iyo iimaanka. Wednesday kasta, iyo ninkayga iyo I leeyihiin koox waxbarasho oo la saaxiibadeena. Waxaan ka qayb kaniisad. Waxaan isku dayi geliyaa si ay waqti subaxdii ah in la yidhaahdo salaadda ah. "
Billado dahab Sanya Richards-Ross yidhi, "Waxaa jira aayado badan oo macno leh ee Kitaabka Quduuska ah, laakiin mid ka mid ah waxaan idinku Naftayda inta badan waa, 'Waxaan samayn kartaa wax walba xagga Masiix kan i xoogeeya!' Taasi aan jeclaa sababtoo ah wadada , waxaan inta badan isku dayayaan in ay wax u qabtaan in ay marar dhif ah la sameeyo ka hor. Waan ogahay in waxa kaliya Ilaaha aniga ii siiyaa xoog in uu waxyaabahan dhammayn. "
Waxaan u tegi karto oo ku saabsan tusaale oo dheeraad ah. Laakiin waxaan rabnaa in aad ogaato in aad ku biiri karto kooxaha oo ka mid ah iyo dad kale oo badan oo u ogolaanaya Ciise Masiix in ay u samaysaa cusub ah aad sanadka cusub iyo nolol aad ka baxsan. Sidee isbedel noocaas ah ku iman kartaa oo ku saabsan?
1. First of dhan, si aad u cusub ah sannadka cusub, waa in aad "Masiixa." Aayadda 17 bilaabmaa, "Sidaas daraaddeed haddii qof Masiix ..." Erayga Giriigga ah ee "in" macnaheedu waa in ay ku jiraan 'meel go'an' ah ama si 'waari ilaa xad go'an'. Maxay ka dhigan tahay in ay ku sugan Masiixa? Ahaanshaha Masiix tusinaysaa ee taagnaa Mu'min ah ka dib markii isaga ama iyada ayaa aqbalay Ciise Masiix sida ay Badbaadiyahayga ah. Haddii aadan ku tahay Masiixa dhexdiisa, waxaad haysan karaa qaab nololeed cusub ama maskax cusub.
Ereyga 'ee Masiix' ama 'isaga' waxa loo isticmaalaa dhowr jeer Axdiga Cusub dhexdiisa si uu u sharaxo jagada iyo faa'iidooyinka in ay Muuminiintu ku leeyahay. Notice Efesos 1: 7. Aayaddani waxa uu inoo sheegayaa in "In isaga aynu ku leennahay madaxfurasho dhiig marayo, cafiska dembiyada, sida ay hodantinimada nimcadiisu tahay ..." Waxaan halkan ka eeg in haddii aad ku tahay Masiixa, dembiyadaadu waa kaa maydhay yihiin hoos dhiiggii Wanka. By Masiixa dhimashadiisa, iyo sababta oo ah waa nimcada Ilaah ee, aad soo furtay ama gacan dembiga iyo ciqaabta dembiga oo waa Jahannamo ka.
Marka labaad, u fiirso Efesos 1: 3. Aayaddani waxa uu sheegayaa in Ilaah "Masiix inagu siiyey barako kasta oo Ruuxa ka jira meelaha jannada ku jira Masiix ..." Haddii aad ku tahay Masiixa, aad leedahay oo Ruuxa in aanad haddii kale ay leeyihiin. Fadlan halkan aragto in this kagama uusan hadlin wax barakeysan. Ahaanshaha Masiixa micnaheedu ma aha waxaad heli doontaa guri weyn ama gaari qaali ah. Laakiin waxaad u baahan doontaa oo Ruuxa sida nabad in waxgarasho kasta ka hadlin oo farxad, kalsooni ku dhex jira dabeylo ee nolosha, iyo rajada jannada ku dhex Quusta ah. Matthew Henry ayaa sheegay, "Barakada Ruuxaani oo jannaduna waa barakooyinka ugu wanaagsan; taasoo aynu ku ma noqon karto xun. "
Haddaba, u fiirso Kolosay 2:10: "Oo waa laydin buuxiyey idinkoo ku jiro, taas oo ah madaxa taaliye kasta iyo amar kasta." Maxay ka dhigan tahay in ay dhamaystiran "Masiixa"? Erayga Giriigga ah ee "buuxiso" waxaa loola jeedaa in 'buuxsanto' ama si 'buuxi'. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad ku tahay Masiixa, aad qabto wax walba oo aad u baahan tahay in ay ku noolaadaan nolosha Christian. Waxaad wax walba oo aad u baahan tahay in la tixgeliyo xaqa Ilaah hortiis. Waxaad wax walba oo aad u baahan tahay si ay u noqotay nolosha tan dhulka nolosha ku xiga Jannada.
Sidaas, waxaana ku aragnaa in "Masiixa" waxay ka dhigan tahay in dhammaan dembiyadeena oo la dhaqo hoos dhiigga iyo waxa aan ka samatabbixiyey xooggii dembiga iyo ciqaabta dembiga. Ahaanshaha Masiix ka dhigan tahay in aan u helay oo Ruuxa sababtoo ah Ciise Masiix; iyo in ay Masiix macnaheedu waa in aan aan ka dhiman yihiin wax kasta oo ku saabsan tahay our badbaadada iyo nolol.
Ahaanshaha "Masiixa" waa talaabada ugu horeysa ee isagoo cusub ah aad ee sanadka cusub.
2. In cusub ah aad ee sanadka cusub, waa in aad xaqiiqsato in aad tahay "noole cusub." Second Corinthians 5:17 sheegay, "Sidaas daraaddeed haddii qof Masiix ku jiro waa abuur cusub ..." Waxaa jira dad badan Masiixiyiinta ah kuwaas oo ku nool ugu gataan, xumeyn, iyo adkaaday nolosha fudud sababtoo ah ma garasho iyo xaqiiqda ah in tan iyo markii ay ku jiraan Masiix, haddii ay dhul cusub soo dhaweynaa oo waa waqtigii iyaga ka fogeeya siyaabo jir oo ku nool bilaabi sida ay maqaamkooda sida ilmo Ilaah.
Bal qiyaas nin dhallinyaro ah oo guri la'aan, disheveled, nijaas, oo miskiinka ah. Isagu wuxuu ku socdaa jidadka tuugsanaysa qadaadiicda kaliya in uu cunto ah in la cuno maalin walba. Maalin maalmaha ka mid, nin ku yimaadda raadinaya isaga, waayo, sida uu ku fadhiyo oo dawarsanayay geeska waddada. Ninkani waxa uu u sheego in uu dhab ahaantii waa ina milkiilaha ganacsi oo qani ah iyo in aabbihiis uu doonayo inuu guriga yimaado, uu naftiisa u heli on track, oo ay waxbarasho u helaan. Waxa uu sheegayaa ninkii dhallinyarada ahaa in badan ka jirto qolka isaga ugu nagaadi aabbihiis iyo wax kasta oo uu u baahan yahay - cunto, dhar, iyo lacag - la qaadi lahaa daryeelka ee ka barta in on. Haddaba, ka fakir hadii in nin dhalinyaro ah oo liita diiday inuu aabbihiis soo qaato on noocan ah u soo bandhigtay oo go'aansaday inuu sii miskiin yahay guri la'aan.
Dabcan taasi waa doqonimo. Laakiin, in ay tahay waxa badan oo masiixiyiin ah samayn kasta iyo maalin kasta. Iyagu ma noolaan sida ay xaaladdooda sida kuwa raacsan Masiixa. Neil T. Anderson ku qoray buuggiisa, ayaa jabiyaha addoonnimada, si aan Shayddaanku "xannibi karaa waxtarka Christian a hadduu idin khiyaanayn karaa Mu'minaadka ah in aad tahay ma aha wax soo saarka ah ee la soo dhaafay - ku xiran dembiga ah, u nugul failure, iyo gacanta ku caadooyinkaaga. "Waxa uu ku dhaco, in la yidhaahdo," Shaydaan waxba ma samayn karno oo ku saabsan ka taaganahay Masiixa, laakiin hadduu idin khiyaanayn karaa Mu'minaadka ah waxa Qorniinku ka sheegayo run ma aha, waxaad ku noolaan doontaa sidii isagoo run ma aha . "
Haddii aadan garasho iyo xaqiiqda ah in aad tahay abuur cusub ee Masiixa ku mintidaan, ka dibna aad marna noolaan doonaa sidii Masiixa kuwii loogu tala galay in aad ku nooshahay. Waxaad haysan doontaa awood badan, nolosha guul in aad haysan karto. Your "sanadka cusub" isla sidii aad u noqon doono "jir ah." Si kasta oo rajo iyo rajo fiican aad dareento ku saabsan sanadka cusub, oo aan loo eegin inta aad go'aan ka si ay u sameeyaan sanadka cusub ee kala duwan, Ibliisku idin xusuusin doonaa wax kasta oo failure aad lahaa in sanadkii la soo dhaafay iyo sano ka hor. Doono aad culays dembiyadoodii iyo qaladaadkaaga bilawga sanadka cusub iyo haddii aad aqbasho been iyo waxay aaminsan yihiin in ay tahay jidka kaliya aad tahay, ka dibna aad u mari doonaan sannad kale ee aan kor ku nool in aad si buuxda, sida a ilmaha Ilaah.
Waxaan halkaan u joogaa inaan kuu sheego in aadan haysan in ay addoommo ugu ahaan dembiga. Ma aha inaad in ay dhex maraan hal sano oo kale ah samaynta khaladaadka isku mid ah iyo geysteen dembiyadii isku mid ah. Waxaad heli kartaa in aad cusub ee sanadka cusub haddii aad garasho daada sida abuur cusub ee Masiixa.
3. In aad cusub ee sanadka cusub, waa in aad iska fogeeya dhan 2 Corinthians 5:17 sheegay in "haddii qof Masiix ku jiro waa abuur cusub" oo waxyaalihii hore. ", Oo waxyaalihii hore way dhammaadeen; Bal eega, wax waliba way cusboonaadeen e. "Waxa ay sheegeen in qeexidda waali waxaa qabanayaan wixii la mid ah marar badan oo filaya natiijooyin kala duwan. Taasi waa run. Oo haddii aad rabto in aad natiijooyin kala duwan ee sanadka cusub, waa in aad joojiso qabanayaan wixii jir isla kaani oo kale mar. Kitaabku waxa uu leeyahay in haddii aad ku tahay Masiixa, iyo haddii aad tahay abuur cusub, oo waxyaalihii hore markaas waa in la "taktay." Maxay yihiin waxyaabaha jir in aad noloshaada in aad u baahan tahay inaad iska fogeeya in sanadka cusub?
Ma been ka sano ee la soo dhaafey? Waxaad dhaafteen salaadda iyo akhriska ereyga Ilaah sano ee la soo dhaafey? Ma khiyaameeyaan oo aydinaan u leedahay in hab sano ee la soo dhaafey? Dumar yahow, waxaad ahaayeen ixtiraam la'aan ku tahay ninkaaga sano ee la soo dhaafey? Nimankow, ma aad ku guul daraysato banaynay Haweenkaaga aad u jeclaataa sida waa in sannadkan la soo dhaafay aad? Carruurta, ma aad waalidkaaga Caasiya sano ee la soo dhaafey? Wixii aad ku sameeyey sanadkii la soo dhaafay oo aad heshay natiijada xun, waxaad u baahan tahay inaad iska fogeeya ee sanadka cusub.
Ogsoonow aayaddan ka Kolosay cutubka 3: "Laakiin haatan iska fogeeya waxyaalahan oo dhan ka baxsan; xanaaq, iyo cadho, iyo xumaan, iyo cay, iyo hadalka ceebta ah oo afkiinna ka baxa. Ma midkoodba ka kale ku seexo, waxaad in uu arko waad iska xoorteen dabiicaddii hore iyo camalkiisa. "
Haddii aad rabto in aad sameyso sanadka cusub ee sanad ka weyn, waa in aad iska fogeeya waxyaalahan oo dhan ka hore in aad ku sameeyey sannadkii la soo dhaafay iyo in sano ee la soo dhaafay in ka dhigay sano in sanad xun. Sii ee la soo dhaafay in Ilaahay xagga Ciise Masiix oo wuxuu idinka qaadan doonaa daryeelka waxaa ka mid ah adiga.
I daaya aan kugu dhiirinaynaa in aad uma dembiyadii iyo guuldarrada sanadkii la soo dhaafay gelin keliya, laakiinse inay ka bartaan iyo iloobin oo iyaga ku saabsan. Waxaan aaminsanahay haddii la dhan Qalbigayguna in goolal badan iyo mashaariic cajiib ah oo aan waligood la dhamaystiro sabab u ah ee dadka aan awoodin inay iska ilaawaan ee la soo dhaafay ka badan sabab kasta oo kale. Waxaad aan dhammayn doona inuu wax badan ee sanadka cusub haddii aad u oggolaatid maskaxdaada si deggan dembiyadii, dhibaato, dhibaato, iyo Guuldarrooyin ee la soo dhaafay.
In Isaiah 43:18, Ilaah ku amray reer binu Israa'iil inay iska ilaawaan waxyaalaha la soo dhaafay. Waxa uu yiri: "Xusuuso waxaad waxyaalihii hore ma, kamana fikiraan waxyaalihii hore." Dhab ahaantii, Ilaah qudhiisu uusan xasuusanayn dambigannaga. A yar oo aayaadka dambe ee cutubka isla ayuu ku yidhi, "Aniga, xataa, anigu waxaan ahay xadgudubyadiinna tirtira, aawaday baan u, iyo sooma aan xusuusan doono dembiyadaadu." Sidaa darteed, haddii Ilaah ma uusan xusuusan dembiyadayada, ma samayn aad u maleyso inay ugu fiican yahay ee na la mid ah in la sameeyo?
Dennis DeHaan qoray yar gabay in uu sidan oo kale:
Bal eeg kama noqonayso on shalay
Sidaas oo ay ka buuxaan failure iyo shaleyte;
Ka hor eeg oo dooni way- Ilaah
Dembi oo dhan waa qirtay waa in aad ilaawin.
My saaxiib, dembiyadii jir oo ka baaqsadey ee la soo dhaafay ka fogeeya. Baro iyaga ka dibna iloobin iyaga oo ku saabsan si ay sanadkan soo socda uu noqon karaa mid aad u weyn, maxaa yeelay waxaa jiri doona sanadka cusub ee aad u jirin hadii aysan jirin sanadka cusub ee aad cusub.
Sida aan la xiro maanta, waxaan doonayaa in aan la hadlo kuwa idinka mid ah oo aan waligood aqbalay Ciise Masiix sida aad badbaadiye. Si kale haddii loo dhigo, waxaad tahay ma "Masiixa" hadda. Waxaan rabaa in aan ku tuso sida aad ku heli karto Masiix. Tani waa jidka keliya ee aad ka bedeli kartaa nolosha gudaha baxay.
Dad badan ayaa u weyn oo ka mid ah hore iyo mid hadda ka hadlay oo Ciise Masiix iyo saameynta uu ku yeelatay noloshooda.
Milateriga weyn Faransiiska iyo hoggaamiye siyaasadeed Napoleon Bonaparte yiri, "Waxaan la yaabsanahay halka riyada hami ka ahay, Kaysar baa leh, iyo Alexander ayaa ka libdhay waa in hawada dhuuban, ridayeen ah Yahuuda - Ciise - awood u fidin Gacmihiisu guud ahaan qarniyo waa in oo xakameeyo ka taliyaan masiirkooda ragga iyo quruumaha. "saaxiib Gacaliye, aad ha kara Ciise Masiix noqon mas'uul ka ah aayaha sidoo kale.
Basketball weyn Julius "Dr. J "Erving yidhi," Ujeedada nolosha waa in laga helo iyada oo loo marayo isagoo Masiixa ee nolosha, iyo fahamka waxa uu qorshaha yahay, oo soo socda qorshahaas. "
Madaxweynihii hore ee George W. Bush ayaa sheegay, "Masiix yahay Faylasuuf ugu weyn: qalbigayga uu bedelay."
UWADA SHAQEEYAAN iyo taariikhyahan Philip Schaff yidhi, "Haddii aan Masiixa, noloshu waa sida fiidkii Habeen madow ka hor; Masiixa la joogo, waa waagu beryo la iftiinka iyo dugaal ee maalinta buuxda ka hor. "
The qoraa Scottish weyn Robert Louis Stevenson yiri, "Masiix Marka soo galeen noloshayda, Waxaan u imid inaan ku saabsan sida markabka si fiican loo maareeyay."
Qoraa iyo warbaahinta Shaqsiyadda British Malcolm Muggeridge yiri, "Waxaan dhihi karaa in aan marnaba ogaaday waxa farxad wuxuu u ekaa ilaa aan bixiyey farxad ku raad-, ama daryeelo in ay ku noolaadaan ilaa aan doortay inay u dhintaan. Waayo, labadan daahfurtay in aan ahay beholden in Ciise. "
Quarterback NFL Sam Bradford yidhi, "Runtii ma arko sabab ah sababta in aad aadan doonayn inaad xiriir la leh Ciise Masiix. Waxaan ula jeedaa, ma aha oo kaliya uu ahaa qabka ugu weyn aadanaha dhulka abid socdaan, uu wax walba oo aan rabo in aan ku Dadaashid. Waxa uu wax walba oo qof ku doonayaan inay ku Dadaashid. "
Wacdiyi ugu caansan dunida ee Luis Palau yiri, "Hal kulan la Ciise Masiix waa ku filan in aad bedesho, isla, weligiis."
Ciise Masiix uu doonayo in uu maanta aad bedesho. Waxa uu doonayaa inuu qof cusub aad ka sameeyaan gudaha baxay. Ilaah wuxuu ku yidhi in Ezekiel 36:26: anna waxaan idin siin A "ayaa sidoo kale qalbi cusub, oo ruux cusubna waan idin gelin doonaa, oo waxaan qaadi doonaa qalbigii dhagaxa ka soo jidhkiinna, oo waxaan idin siin doonaa qalbi jiidh ah . "
Ilaah waxa uu rabaa inuu keeno ku saabsan noocan oo kale ah isbedel in aad noloshaada. Taasi waa sababta uu soo diray Wiilkiisa Ciise Masiix ah, sidaas daraadeed waannu badbaadi kara dembiga iyo ciqaabta dembiga ka. Kitaabku waxa uu leeyahay in John 3:16 "Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo uu, in ku alla kii isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah."
Ii Ogolow in aan muujiyo sida aad maanta aqbali karin Ciise Masiix sida aad ah Badbaadiyeheenna.
First of dhan, waa in aad fahamsanahay in aad tahay dambiile ah, oo kaliya sida aan ahay, iyo in aad jebisay sharciga Ilaah. Baybalku wuxuu Rooma 3:23: "Maxaa yeelay, dhammaan way wada dembaabeen oo gaadhi waayeen ammaanta Ilaah." Fadlan fahmay in sababtu waa dembigiinnii aad, aad u qalmaan taqsiirta weligeed ah in cadaabta. Romans 6:23 sheegay "mushahaarada dembigu waa dhimashada ... Tani waa dhimashada jidh ahaaneed labadaba xabaasha iyo dhimashada ruuxa weligeed ah ee baddii dabka ahayd.
Sida aad la badbaadin karaa ka dhimashada leh? Romans 10: 9,13 ayaa yidhi: "Taasi haddaad afka ka qiratid in Ciise yahay Rabbiga, oo waa inaad aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa ... Waayo, ku alla kii magaca ah loogu yeedhi doonaa Eebihiin waa badbaadi doonaa. "
Haddii aad aaminsan tahay in Ciise Masiix ku dul dhintay macatabka dambigiinna, oo waxaa lagu aasay, oo haddiiba kacay kuwii dhintay, oo aad rabto in ay aaminaan for badbaadintaada maanta, fadlan ku baryayaaye, ii arrintan salaadda fudud: Quduuska ah Aabbaha Ilaah, waxaan aaminsanahay in aan waxaan ku ahay dembiile iyo inaan samaynay waxyaalo xunxun qaar ee noloshayda. Waan idinka jebiyey xeerarka aad. Wixii Ciise Masiix aawadiis, fadlan i dhaafo dambiyadiinna dibna aan. Hadda waxaan la dhan qalbigayga in Ciise Masiix u dhintay aniga aawaday, oo waxaa lagu aasay, oo u sara kacay rumaysan. Rabbi Ciise, fadlan qalbigayga geliyey iyo naftayda badbaadin iyo in la beddelo nolosha maanta. Aamiin.
Haddii aad ku kalsoon tahay oo keliya Ciise Masiix sida aad ah Badbaadiyeheenna, oo aad tukaday in salaada iyo waxa loola jeedo ka qalbigaaga, ayaan wax idiinka sheegayaa in ku saleysan ereyga Ilaah si, hadda waxaa la idinka koriyey Jahannamo iyo aad ku socoto Jannada. Ku soo dhowow qoyska Ilaah iyo hambalyo on samaynayaan waxa ugu muhiimsan ee nolosha iyo in la siiyo Ciise Masiix sida aad Rabbiga ah Badbaadiyeheenna. Wixii macluumaad dheeraad ah si ay kaaga caawiyaan in aad ku korto caqiidadaada cusub oo laga helay Masiixa, tag Injiil Light Society.com iyo akhriyo "Maxaan Sameeyaa ka dib Waxaad illinka laga galo". Ciise Masiix ayaa sheegay in John 10: 9, "Waxaan ahay illinka:. Igu by haddii nin wax ka soo galo, wuu badbaadi doonaa, wuuna soo doonaa oo bixi doonaa, daaq buuna heli doonaa"
Ilaah wuu idin jecel yahay! Waxaan aad u jeclahay! Ilaahay ha idin barakeeyo, oo waxay leeyihiin Year New weyn!